कपाल झर्ने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ? – Samatal Online
कपाल झर्ने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ?
कपालले मानिसहरुलाई सुन्दर र आकर्षण देखाउँछ र सुन्दरतामा निखार ल्याउँछ । कसैलाई मन नपर्ला र ? सर्लक्क परेको कपाल ।त्यसैले सबैले चाहन्छन् आफ्नो कपाल सर्लक्क र राम्रो होस् भन्ने । सोहि कारण मानिसहरु आफ्नो कपाल राम्रो बनाउनको लागि मानिसले धेरै मेहनत गर्छन् ।
तर कहिलेकाही आफुले सोचेअनुरुप भइदिदैन । विभिन्न कारणले गर्दा कपालमा अनेकौं समस्या निम्तन सक्छ । जुन पायो त्यही सौन्दर्य सामग्रीको प्रयोग गर्दा पनि कपालको चमक हराउँछ । कपाल झर्ने, हाँगा पलाउने, टुक्रिने जस्ता समस्या अधिकांशको हो ।
५. घ्यु कुमारीमा रहेको चिल्लो पदार्थ निकालेर कपालमा लगाउने र आधा घण्टा पछि सफा पानीले पखाल्ने । यस्तो गर्दा कपाल झर्ने समस्यामा कमि आउँछ ।
७. प्याज काटेर टुक्रा-टुक्रा पार्ने र शुद्द पानीमा राखेर त्यसलाई उमाल्ने । र त्यसलाई निकालेर त्यसै छाडिदिनुहोस् । पानीमा प्याजको कलर आएपछि त्यसमा कागतीको रस मिसाएर त्यसले कपालमा मसाज गर्ने । यसो गर्दा पनि कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
नुहाएपछि कपाल राम्ररि सुक्न दिएर मात्र कोर्ने । अफिसको हतारले गर्दा धेरै मानिसले नुहाउनासाथ कपाल कोर्ने बानी हुन्छ । तर, यो बानी राम्रो होइन । त्यसैले कपाल पुर्णरुपमा सुकेपछी मात्र कपालमा काईयो लगाउने गर्नुहोस् ।
हेड रोलर्सको प्रयोग धेरै नगर्ने । कपाललाई कर्ली बनाउन रातभरी हेड रोलर्स राखेर नछोड्नुहोस् । तपाईं को कपालमा त्यसको अधिकतम समय ३/४ घन्टा मात्र हुन्छ । धेरै समय राख्दा तपाईको कपाल रोलर्समा फसेर टुट्छ र कपाललाई कमजोर बनाउछ । एजेन्सी